I-Adobe InDesign - Umculo wamahhala kunye nokukhutshwa kweendaba kwiividiyo zakho ze-YouTube okanye iiprojekthi ze-multimedia
Udidi: I-Adobe InDesign
I-Adobe InDesign yi-desktop yokushicilela kunye nesicelo sofakelo lwesofthiwe esenziwe yi-Adobe Systems. Ingasetyenziselwa ukwenza imisebenzi efana neefowers, iiflaya, iincwadana, amaphephancwadi, amaphephandaba, iintetho, iincwadi kunye neencwadi. I-InDesign inokushicilela umxholo ofanelekileyo kumadivayisi weepilisi ngokubambisana ne-Adobe Digital Publishing Suite. Abaqulunqi bezobugcisa kunye nabaculi bokuvelisa ngabasebenzisi abakhulu, ukudala nokubeka iimpapasho zemihla ngemihla, iiposters, kunye neendaba zokushicilela. Ikwaxhasa ngokuthekeliswa kwiifom ze-EPUB kunye ne-SWF ukwenza i-e-ncwadi kunye neencwadi zedijithali, kuquka amaphephancwadi edijithali, kunye nomxholo ofanelekileyo wokusetyenziswa kwiikhompyutha zekhompyutha. Ukongeza, i-InDesign isekela i-XML, iifayile zamagama, kunye nezinye izinto zokubhala, okwenza ukuba zilungele ukuthumela umxholo wesicatshulwa esetyenzisiweyo kwezinye iifomati ze-digital kunye ne-intanethi. Inkqubo yomsebenzisi we-Adobe InCopy isebenzisa injini efanayo yokufometha njenge-InDesign.